देशैभरका ११ मध्ये १० उपमहानगरमा मतगणना जारी, कहाँ कसको अग्रता ? - सुनाखरी न्युज
देशैभरका ११ मध्ये १० उपमहानगरमा मतगणना जारी, कहाँ कसको अग्रता ?
Posted on: May 14, 2022 - 4:35 pm
देशैभरका ११ मध्ये १० उपमहानगरमा धमाधम मत गणना जारी छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १७ नम्बर वडामा निर्वाचन हुन बाँकी भएकाले १० उपमहानगरमा मत गणना जारी छ। धनगढी, इटहरी र कलैया उपमहानगरमा भर्खरै मत गणना सुरु भएकाले नतिजा बाहिर आइसकेको छैन। नतिजा आएका सात उपमहानगरमा यस्तो देखिएको छ।
बुटवलमा गठबन्धनबाट काँग्रेस अग्रता
घोराहीमा गठबन्धनबाट माओवादी अग्रता
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले अग्रता लिएको छ। अहिलेसम्मको मत गणनामा गठबन्धन तर्फबाट मेयरमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्माले १७२ मत एमालेका नरुलाल चौधरीको १४५ मत प्राप्त गरेका छन्।
हेटौडामा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी अग्रता
नेपालगञ्जमा गठबन्धनबाट काँग्रेसको अग्रता
जनकपुरमा स्वतन्त्रको अग्रता
जितपुर सिमरामा गठबन्धनबाट माओवादी अग्रता
धरानमा गठबन्धनबाट काँग्रेसको अग्रता